allsanaag.com - Culusow oo Muqdisho qado ku sameeyey
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3209	Days	12	Hours	29	Minutes	37	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Culusow oo Muqdisho qado ku sameeyey
Written by khalid	Daawo Madaxda Dawlada oo Muqdisho kula shiray Odayaasha iyo Dhalinyarada Beesha Hawiye. Askarigii daba lignaan jiray kursi aan miis lahayn iyo meel aan cunto lagu cuni karin oo gadaashiisa ah intuu fadhiisiyey ayuu isaguna miis cunta ku buuxdo fadhiyaa oo wax ku cunayaa ama cabayaa.
Madaxweynaha Xasan Culusoow iyo Wasiiradiisa Fawsiyo Xaaji oo miis qurxoon ku wada qadaynaya. Shaqadii Qaranka waxa laga doortay, oo afka loo soo dhuubay in waqti badan la siiyo sidii Soomaali loo kala goyn lahaa.